Taariikhda My Butros » Ka hadal sidaad u Love la'aanteed Words
Last updated: Oct. 22 2020 | 2 min akhri
Extreme waxa ugu fiican ayaa sheegay in markii ay ku yidhaahdeen, “In ka badan erayada waa inaad sameyso si ay u dhab ah oo dhan. Markaas waxaad aan ku leeyahay in aad i jeceshihiin. Koos durbaba waan ogahay lahaa.” in ay hit weyn ka '80 ee, Ka badan tahay erayo. Taasina waa noocee ah kama dambaysta ah inaynu dhammaan Rajayn. Waxaa jira siyaabo badan oo muujinaya in qofku ah sida aad dareensan tahay taas oo aan u baahnayn isticmaalaya erayada sida qalab. Halkan waa shan siyaabood oo ay u sheegaan qof in gaar ah sida aad dareensan tahay:
Waayahay, si farsamo ahaan waa la tixgelin karo khiyaameeyaan yar sababtoo ah lyrics waa erayo laakiin ma aha in hadalka lagu hadlay. Waxaa jira heeso badan oo qurux badan uu ka soo xusho oo ay ku jiraan Bryan Adams’ Samadu, Waqtiga Cyndi Lauper ka dib Time iyo Alanis Morissette ee Head badan Cagaha ku xidhan tahay fariinta aad isku dayayso inaad soo dirto. Just dhegi diiwaanka ama haddii aad tahay gabayaa ama / iyo muusikiiste sababta aan u siiyo go a at serenading aad lover? Waxay ku darayaa a xiriiri shakhsi more.
Ubax & Hadyadaha
Ubax waa hab fiican oo ay muujiyaan jacaylka aad aan si dhab ah u sheego. Sidaas hubiyo in aad ogtahay ubaxa jacaylka aad ee jecel yahay oo halkaas ka soo tagto. Ama haddii kale tagaan wax ay jecel yihiin haddii aanay soo gelin ubaxyadii dhaqanka sida cadar / garjarida, ka-soo-, buugaag, DVD-, iwm … Oo muujinaysa in aad u ogaato waxa ay jecel yihiin muujinaysa jacaylka qofka, sababtoo ah waxaad dhegaysan iyagii iyo in aad xasuusato wixii ay jecel yihiin. Dadka waxyaalahan aragto xataa haddii aanay waxba kuma uu hadlin.
Them ogolow Control kontaroolka Remote
U oggolaanshaha gacanta jacaylka faraha ka fog halkii ay u qaadato waqti oo dhan u taliya waa hab macaan iyo khiyaano oo muujinaysa in aad u jeclahay. Ka dib dhan, in la siiyo ilaa show aad jeceshahay waxa uu noqdaa jacaylka, sidaasna maaha?!
Art & Sawirada
Haddii aad tahay hal abuur la abuurayo fikrad run ahaantii jaceyl sawir ka taataabtay ee jacaylka aad noqon kartaa. Ama fikrad kale oo fiican ayaa loo qaadan sawir aad labadaba lagu dahaaray oo u soo bandhigaan jacaylka aad noloshaada.
Degto / guursadeen
Well waxaa jira hab ka fiican oo muujinaya jacaylka aad qof ka badan geysteen iyaga! Sidaa awgeed haddii aad diyaar u ah oo aad u malaynayso in ay laga yaabo in aad u, waxa aad sugeyso?!